Booqdayaasha ajnabiga ah ee la tallaalay oo kaliya ayaa loo oggolaan doonaa inay soo galaan Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Booqdayaasha ajnabiga ah ee la tallaalay oo kaliya ayaa loo oggolaan doonaa inay soo galaan Mareykanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Soo-booqdayaasha ajnabiga ah ee soo booqda Mareykanka waa inay muujiyaan caddeyn ah in si buuxda looga tallaalay COVID-19 marka xannibaadaha safarka, ee ka mamnuucaya safrayaasha adduunka intiisa badan inay soo galaan dalka, ugu dambeyn.
Dowladda Mareykanka ayaa dejineysa qorshaha dib -u -furista safarka caalamiga ah.
Socotada shisheeye ee soo galaya Mareykanka waa inay haystaan ​​caddeyn tallaal.
Socotada la tallaalay oo keliya ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan Mareykanka.
Sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan Aqalka Cad, Dowladda Mareykanka waxay ka shaqeyneysaa qorshe ay ugu baahan tahay ku dhawaad ​​dhammaan booqdayaasha ajnabiga ah ee Mareykanka si ay u muujiyaan caddeyn ah in si buuxda looga tallaalay COVID-19 markii xannibaadaha safarka, ee ka mamnuucaya safrayaasha adduunka intiisa badan soo gelitaanka dalka, ugu dambayntii waa la qaaday.
Sarkaal aan la magacaabin ayaa sheegay in Aqalka Cad uu doonayo inuu dib u furo safarka, taas oo kor u qaadi doonta ganacsiga shirkadaha diyaaradaha iyo warshadaha dalxiiska, laakiin xannibaadaha socdaalka ee hadda ka horjoogsanaya booqdayaasha dalal badan inay u safraan Mareykanka isla markiiba lama garaaci doono, marka la eego kor u kaca kala duwanaanshaha Delta ee fayraska oo aad loo kala qaadi karo.
Maamulka Biden wuxuu leeyahay kooxo wada shaqayneed oo ka shaqeeya “si loo helo nidaam cusub oo diyaar u ah marka aan dib u furi karno safarka,” sarkaalku wuxuu yiri, isagoo raaciyay inay ku jirto “qaab weji leh oo waqti ka dib la micno noqon doona, marka laga reebo xaddidan, in dadka ajnabiga ah ee u safraya Mareykanka (oo ka socda dhammaan waddamada) waxay u baahan yihiin in si buuxda loo tallaalo. ”
Xayiraadaha safarka ee aan caadiga ahayn ee Mareykanka ayaa markii ugu horreysay lagu soo rogay Shiinaha bishii Janaayo 2020 si wax looga qabto faafitaanka COVID-19. Wadamo kale oo fara badan ayaa lagu daray, waxaa ugu dambeeyay Hindiya bishii May.
Faallooyinka sarkaalka ayaa ahaa astaanta ugu xooggan ilaa maanta in Aqalka Cad uu arko waddo lagu furayo xayiraadahaas.
Sarkaalka Aqalka Cad ayaan isla markiiba ka jawaabin su'aalaha ku saabsan in maamulka uu sameynayo qorshayaal sidoo kale looga baahan yahay martida ka imaanaysa Mexico iyo Canada in la tallaalo ka hor inta aysan ka gudbin xuduudaha dhulka.
Waqtigan xaadirka ah, socotada kaliya ee ajnabiga ah ee loo oggol yahay inay dhulka uga gudbaan Mareykanka oo ka yimaada Mexico iyo Canada ayaa ah shaqaalaha daruuriga ah sida darawalada xamuulka ama kalkaaliyayaasha.
Mareykanka wuxuu hadda xannibay inta badan muwaadiniinta aan Mareykanka ahayn ee 14-kii maalmood ee la soo dhaafay joogay Boqortooyada Ingiriiska, 26-ka waddan ee Schengen ee Yurub oo aan lahayn kontaroolo xuduud, Ireland, Shiinaha, Hindiya, Koonfur Afrika, Iran iyo Brazil.